Saturday February 26, 2022 - 18:43:39 in Wararka by Xarunta Dhexe
Ciidamada Ruushka ayaa maalintii saddexaad ku garaacay magaalooyinka dalka Ukraine oo ay ku jirto caasimadda dalkaasi ee Kyiv, iyaga oo ku garaacay gantaallo, waxaana wakaaladda wararka Ruushka ee Interfax ay sheegtay inay qabsadeen magaalada Melitop
Ciidamada Ruushka ayaa maalintii saddexaad ku garaacay magaalooyinka dalka Ukraine oo ay ku jirto caasimadda dalkaasi ee Kyiv, iyaga oo ku garaacay gantaallo, waxaana wakaaladda wararka Ruushka ee Interfax ay sheegtay inay qabsadeen magaalada Melitopol ee koonfurta bari ee dalkaas.
Saraakiisha Ukrain ayaan si degdeg ah loo helin si ay uga hadlaan masiirka Melitopol, waxaana wasiirka ciidamada Britain James Heappey uu shaki galiyay warbixinta, isagoo sheegay in magaalada ay ku nool yihiin 150,000 oo qof ay wali ku jirto gacanta Ukraine.
Ilaha sirdoonka reer galbeedka ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka ay la kulmeen iska caabin aad uga xoog badan sidii ay filayeen, waxaana tani ay si weyn hoos ugu dhigtay horumarkooda tan iyo markii duulaankooda uu bilowday Khamiistii.
Haddii warbixinta Interfax ee ku saabsan Melitopol, oo soo xiganaysa wasaaradda difaaca ee Ruushka, la xaqiijiyo, waxay noqonaysaa xaruntii ugu horreysay ee Ruushku qabsado.
Ugu yaraan 198 qof oo Ukrain ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah ayaa lagu dilay 1,115 qofna waa lagu dhaawacay duulaanka Ruushka ilaa hadda, sida ay sheegtay Interfax oo soo xigatay wasaaradda caafimaadka Ukraine. Ma cadda in tiradu ay ka koobnaayeen dad rayid ah oo kaliya.
Duqa magaalada Kyiv Vitali Klitschko ayaa sheegay in 35 qof oo ay ku jiraan labo caruur ah ay ku dhaawacmeen dagaal xalay ka dhacay magaalada.
Madaxweyne Volodymyr Zelenskiy, oo soo duubay fariin muuqaal ah oo ka timid meel ka baxsan xafiiskiisa Kyiv, wuxuu diiday inay is dhiibaan.
"Hub iska dhigi mayno, waanu difaacaynaa dawladnimadeena,” ayuu yidhi.
Zelenskiy mar hore waxa uu muujiyay in uu diyaar u yahay in laga wada hadlo xabbad joojin iyo wadahadal nabadeed, si la mid ah Kremlin-ka, laakiin xiriirrada diblomaasiyadeed ee ku meel gaadhka ah ayaan ilaa hadda wax natiijo ah ka soo bixin.
Hubka Nukliyeerka oo ku rakibnaa Diyaaradaha Ruushka ee soo galay Hawada Sweden "TV4"